Apple dia midera ny hatsaran'ny App Store: fampandrosoana, fiarovana ary fahatokisana | Vaovao IPhone
Apple dia midera ny hatsaram-panahin'ny App Store: fampandrosoana, fiarovana ary fahatokisana
Raha tsy maintsy nofaritako izay misolo tena ahy ny Apple App Store amin'ny teny tokana tsy misy fisalasalana fahatokiana. Fivarotana fampiharana izay misy rindranasa an'arivony maro ho an'ny fitaovanao Apple, ny ankamaroan'izy ireo dia nomarihin'ireo mpamorona tsy mitonona anarana tanteraka izay tsy fantatsika velively.
Fa raha nampiantranoina tao amin'ny App Store izy ireo dia midika izany fa efa izy ireo nojerena sy nankatoavin'i Apple, ary voaro tanteraka izy ireo. Manaiky izahay fa midika izany fa tsy maintsy manaraka ny torolalan'ny orinasa izy ireo, izay matetika loatra loatra, ary tsy manana fahalalahana mihetsika izay ananan'ireo sehatra hafa toa ny Google Play. Saingy azo itokisana sy azo antoka izy ireo, tsy azo lavina izany.
Vao nanavao ny atin'ny azy i Apple Malagasy avy amin'ny App Store, izay manazava azy ireo fiasa sy tombony lehibe amin'ny fivarotana fampiharana anao. Manasongadina ny famoronana, ny fahitana, ny fiainana manokana, ny filaminana ary ny fahatokisana.
Manazava izany ny orinasa isan-kerinandro dia misy fampiharana na fanavaozana maherin'ny zato mahery averina dinihina avy amin'ny ekipa mpandrafitra programa Apple, misy teknisiana mihoatra ny 500 miparitaka erak'izao tontolo izao. Maherin'ny XNUMX ny fampiharana nojerena amin'ny fampiasana teknolojia ara-pahasalamana an'ny HealthKit, CareKit, na ResearchKit.
Nilaza koa izy fa tamin'ny taon-dasa dia nandà fampiharana maherin'ny 150.000 noho ny tsy fanarahana ny lalàna momba ny tsiambaratelo napetrak'i Apple. Ny isan'ny fampiharana na fanavaozana nolavina dia efa mihoatra ny iray tapitrisa. Raha atotaly dia maherin'ny 2 tapitrisa ireo apps nesorina noho ny tsy fisian'ireo fanavaozana mifandraika sy latsaka ivelan'ny protokolon'i Apple.
90% ny fampiharana no dinihina ao anatin'ny 24 ora
Apple dia nilaza fa ny 92 isan-jaton'ny iPhone amidy tao anatin'ny efa-taona farany dia mihazakazaka ny iOS 13 sy efa ho ny 90 isan-jaton'ny fangatahana no jerena ao anatin'ny 24 ora. Apple dia nandoa maherin'ny 155 tapitrisa $ ho an'ny mpamorona hatramin'ny 2008, ary olona maherin'ny 500 tapitrisa no mitsidika ny App Store isan-kerinandro.
Nolazainy fa ny Maimaimpoana ny 85 isan-jaton'ny fangatahana, ary tsy mandoa na inona na inona amin'i Apple ireo mpandraharaha ireo. Maherin'ny 50% ny fisintoman'ny rindrambaiko dia avy any ivelan'ny firenena fonenan'ny developer.
Ary farany, nanamarika i Apple fa ny fanadihadiana iray tamin'ny taona 2019 dia manazava fa ny App Store dia nanamora mihoatra ny 519 miliara dolara amin'ny varotra niomerika manerantany, ary mampiroborobo asa mihoatra ny 2.1 tapitrisa any Etazonia, manao azy ho iray amin'ireo sehatra mitombo haingana indrindra amin'ny toekarena amerikana. Mazava ho azy, angona izy ireo hahazoana tratra, tsy misy isalasalana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » IPhone Security » Apple dia midera ny hatsaram-panahin'ny App Store: fampandrosoana, fiarovana ary fahatokisana
Vao namoaka ny iOS 14.0.1, iPadOS 14.0.1, ary ny watchOS 7.0.1 i Apple